5:46 PM ညီနေမင်း, ညီနေမင်း-(နည်းပညာ) ကွန်ပြူတာသင်ခန်းစာများ No comments
Group (9) Photo and Video Editing Collection (82 MB)
Group (8) Internet Ebook Collection (158 MB)
Group (7) Programming Ebooks Collection (62 MB)
Group (6) Web Essential Ebook collection (27 MB)
Group (5) Networking Ebook Collection (110 MB)
Group (4) Graphic Ebooks collection (133 MB)
Posted: 14 Jul 2013 08:27 AM PDT
ဒါကတော့ Video နဲ့ photo Editing စာအုပ်လေးတွေ စုထားတာပါ။ အကုန်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး. စုစုပေါင်း စာအုပ် (5) အုပ် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. စာအုပ်နာမည်တွေ ကို အောက်မှာ ရေးပြပေးထားပါတယ်။ စာအုပ်အားလုံး ပြန်စုစည်း နေပါ တယ်. ဒီနေ့ည တစ်အုပ်ချင်းစီ ပြန်တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်အုပ်ချင်းစီ Download လုပ်ချင်သူများ မနက်ဖြန်ဆို ရယူနိုင်မှာ ဖြစ် ပါတယ်။ အခု စာအုပ်တင်တာတွေ ပြီးသွားရင် ဖုန်းဆိုက်ဖက်ကို လှည့်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Zippyshare | Solidfiles | Filecloud | Ziddu | Tusfile | Mirrorcreator
ကဲဒါကတော့ Internet နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Ebooks တွေကို စုစည်းပေး ထားတာပါ. စုစုပေါင်း (15)အုပ် ရှိပါတယ်။ အားလုံးတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ နောက်ပိုင်း ဒီပို့စ်တွေမှာပဲ တစ်အုပ်ချင်းစီကို ထပ်တင်ပေးပါ့မယ်။ ခုတော့ အုပ်စုအလိုက်ကို တစ်စုတည်းဖြစ်အောင် စုစည်းရင်းနဲ့ ရတဲ့အချိန်လေးမှာ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ပါတဲ့စာအုပ်တွေကိုတော့ အောက်မှာ အစဉ်လိုက် စဉ်ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Programming နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေပါ. စာအုပ်တွေက များလွန်းလို့ အကုန်လုံး မစုနိုင်သေးဘူး။ ပျံ့ကျဲနေတယ်။ ခုရသလောက်လေး စုပြီးတင်ပေးလိုက်တယ်။ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပါစေ။ စာအုပ်စာရင်းကို အောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေကို တစ်အုပ်ချင်စီ အခုပို့အောက်မှာပဲ ထပ်ထပ်ပြီး ဖြည့်စွက်ပေးသွားမှာပါ။ စာအုပ်ပုံကိုတော့ မထည့်တော့ပါဘူး။ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေအောင် အမြဲစဉ်းစားထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သွားမှာပါ။ အဲ့အတွက် စိတ်မပူ ပါနဲ့။ ကျနော် မြန်မာပြည်ကသူတွေအတွက် အမြဲတမ်းထိပ်ဆုံးကနေ စဉ်းစားတတ်ပါတယ်။ အဲ့အတွက် တစ်အုပ်ချင်းစီ ဒေါင်းရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကို စောင့်စေချင်ပါတယ်။
basic of csharp by sevenlamp
Posted: 14 Jul 2013 04:27 AM PDT
အားလုံးပဲ လိုချင်ကြမယ့် Group ဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။ အထဲမှာ Joomla ဖြင့် ၀ဘ်ဆိုက်ရေးနည်း၊ Wordpress ဖြင့် ၀ဘ်ဆိုက်ရေးနည်း၊ Blogger ၀ဘ်ဆိုက်ရေးနည်း အများကြီးပါပါတယ်။ စုစုပေါင်း အုပ်(20)ပါပါတယ်။ Size ကလည်း (27 MB) ဆိုတော့ ဒေါင်းထားလိုက်ပါ။ တကယ့်ကို အကျိုးရှိတဲ့ စာအုပ်တွေပါ။ စာအုပ်စာရင်း ကိုအောက်မှာ ရေးပြထားပါတယ်။
Content Management System & Dynamic Portal Engine
Domain Name System ( DNS ) Server
MySQL lessons in Burmese
Peek A BooPost
Wordpress Making by Yamanya PhoeLaPyae
Zippyshare | Solidfiles | Filecloud | Ziddu | Sharebeast | Mirrorcreator
Networking နှင့် သက်ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေကို စုစည်းပြီး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ တင်ပေးသမျှ စာအုပ်အားလုံးဟာ မြန်မာလိုရေးထားတာ ချည်းပါပဲ။ အခု စုစုပေါင်း (၇)အုပ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က နယ်ဝေးက သူများ တဖြည်းဖြည်းချင်း Download လုပ်ယူပါ။ 110 MB လောက်ပဲဆိုတော့ အဆင်ပြေမယ်တော့ ထင်တာပါပဲ။ စာအုပ်စာရင်းအောက် မှာ ရေးပေး ထားပါတယ်။
ISA Sever 2006 Configuration
U Zaw Lin Youth ( Networking_Essential)
Using Network By U Aung Lin
Beginners guide to Networking 2
Posted: 14 Jul 2013 03:48 AM PDT
ဒါကတော့ Graphic နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေကို စုစည်းထားတာပါ။ Autocad 2010 Ebook အတွက် work file ပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ စုစုပေါင်း (၈)အုပ်ရှိပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း 100 MB ကျော် သွားပါတယ်။ အဆင်ပြေလောက် မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါ တယ်။
Corel Draw (Art Design)
learning guide 3D studio max
Matlab MM book